Pasi penyeredzi imwe chete, naJohn Green, inoverengeka yekutenda hupenyu. | Zvazvino Zvinyorwa
Pasi penyeredzi imwe chete
John Ortiz | | Vanyori, Type, Literature, Vechidiki Mabhuku, Novela
Pasi peIye Nyeredzi, naJonh Green.
Heino basa rinofamba kwazvo, rinofamba uye rine hunyanzvi. Pasi penyeredzi imwe chete anorondedzera zvakaitika kuna Hazel Grace Lancaster, ane makore gumi nematanhatu ane makore gumi nematatu achitambura nekenza yehutachiona kwemakore matatu.. Panguva yekutaurwa kwezviitiko, chirwere chiri muchikamu IV, saka chakatopararira kumapapu e protagonist. Kurwisa mhedzisiro yemastastasis, vanachiremba vakasarudza kuyedza mushonga wekuyedza paari.
Kurapa kurudziro kunosanganisira kurara kwenguva refu. Kana Hazel asina kurara, anozvibata mukuverenga bhuku rake raanofarira Kutambudzika kweImperial. Nguva nenguva musikana anoenda kuboka rekutsigira vechidiki vane gomarara kwaanosangana naGus, waanofamba naye parwendo rune njodzi (nekuda kwehutano hwake) uye kuvhura moyo yavo zvisinei nemamiriro ezvinhu. Mune iri basa muverengi anobatanidzwa mune iyi nyaya yehudiki, inotyisa uye yakanaka rudo, ine meseji yakasarudzika yekukoshesa hupenyu uye vanhu varimo.
1.3 Chii chakamutungamira kuti ave munyori
1.4 Iyo yakanyanya-kutengeswa novel muna 2012
1.5 John Green paYouTube
1.6 Iye munyori uye nhabvu
2 Kubudirira kwechirongwa chebhuku iri pasi peiyo Nyenyedzi
2.1 Kurapa kwakachinja hupenyu hwake
2.2 Nhoroondo ine vanhu chaivo
2.4 Meseji yebhuku rinofanira-kuona
John Michael Green akaberekerwa muIndipolis, Indiana, United States, musi waAugust 24, 1977. Ndiye dangwe Mwanakomana waMike naSydney Green, munin'ina wake anonzi William Henry Hank Green II. Kwemakore mashoma ekutanga iye nemhuri yake vaigara kuMichigan, kozoti Alabama, uye pakupedzisira Orlando, Florida.
Akaenda kuLake Highland High Chikoro muOrlando. Akapedza kudzidza muna 2000 kubva kuKenyon College ine mbiri mbiri muChirungu uye Zvitendero Zvidzidzo. John wechidiki aida kuve mupristi, asi mushure mekushanda semudzidzi pachipatara chevana muColumbus, Ohio, akafunga kuve munyori.
Chii chakamutungamira kuti ave munyori
Basa rake rekuchengeta vacheche vane hutachiona hunotyisidzira hupenyu hwakamukurudzira pamabasa ake. Mabhuku ake anosanganisira: Kutsvaga Alaska (2005) uye Pasi penyeredzi imwe chete (2012); yekupedzisira ndiyo runyorwa rwake rwakakurumbira, mukurumbira waro wakamuendesa kugirazi hombe (2014). Sarudzo yake yekuve munyori yakatsigirwa nekubudirira kwake, kwete pasina Green ari pakati vanyori makumi maviri vanobhadharwa kwazvo vegore 20.
Iyo yakanyanya-kutengeswa novel muna 2012
Pasi penyeredzi imwe chete yakasvika # 1 pane akanyanya-kutengesa zvinyorwa rakaburitswa ne New York Times muna Ndira 2012 (iro zita rekutanga renhoroondo muChirungu ndi Iko kukanganisa mune nyeredzi dzedu). Saizvozvo, ino nganonyorwa iri pakati pemabhuku makumi maviri anotengwa zvakanyanya muzana rino ramakore makumi maviri nerimwe. Mamwe mabasa anozivikanwa emunyori ari Kuwanda kweKatherinas (2006), Regai chando: Mazuva matatu ezororo (semubatanidzwa munyori) uye Mapepa maguta (2008).
John Green paYouTube
Saizvozvowo, Muna 2007 munyori akatanga iyo YouTube chiteshi VlogBrothers, pamwe chete nemukoma wake, vakatarisa pane akateedzana ezvidzidzo. Makore gumi gare gare, nhoroondo iyi yatove nevanopfuura mamirioni matatu vanyoreri uye 3 miriyoni maonero. Parizvino ane vana vaviri, Henri naAlice, chibereko chemuchato wake kuna Sarah Urist.
Iye munyori uye nhabvu
Iye anofarira nhabvu; mutsigiri akatendeka weLiverpool FC uye ari muridzi weWimbledon FC yechikamu chechitatu cheEngland. John Green akaonekwa aine obsessive kusagadzikana kusagadzikana. Akapa maonero ake uye akanyatsokurukura nezvechirwere ichi panzira yake yeYouTube kuitira kuti azivise vanhu vazhinji uye nekupa rutsigiro kune vamwe vakawirwa nenjodzi.
Kubudirira kwechirongwa chebhuku iri pasi peiyo Nyenyedzi
Kurapa kwakachinja hupenyu hwake
Mushure mekutambura nekenza kwemakore matatu, iye ane makore gumi nematanhatu protagonist anomanikidzwa kuenda kuboka rerapi uye rutsigiro rwevanhu vari kutambura nechirwere ichi. Hazel Nyasha Lancaster anogamuchira asingazezi kuraira kwaamai vake.
Ari muboka rekurapa anosangana naAugustus 'Gus' Waters ane makore gumi nemanomwe, uyo ari kuregererwa mushure mekudimburwa gumbo nekuda kwebundu rakaipa.
Kushingairira kwaGus uye charisma yehupenyu kunonakidza kunaHazel. Iye zviri pachena anokwezva kwaari, uye vese vasingadzivisike vanowira murudo, kunyangwe vachiziva kuti zvese zvinopera zvinosiririsa, Zvakadaro, vakatora nhoroondo yavo. Kunyangwe hukama hwacho hwaizoparadzwa kubva pakutanga, Gus anokwanisa kutsikisa Hazel.
Anomudzidzisa iyo "isingagumi nemazuva akaverengwa" nzira, iyo yaanochinja maitiro ake kuhupenyu. Ivo vaviri vanosarudza kuenda kuAmsterdam kunosangana nemunyori webhuku ravanofarira, Kutambudzika kweImperial. Ikoko hukama hwavo hunosimba uye vanodzidza kuti hupenyu hunowanzonetsa kurarama nawo - gomarara kana kwete.
Nhoroondo ine vanhu chaivo
Chinhu chakasarudzika munoverengeka iyi kuwanda kwevatambi vayo, hapana chakawedzeredzwa. Iwo ma protagonist anoda mitambo yemhirizhonga yemavhidhiyo, pamwe nemabhuku kana mabhaisikopo azere nemifananidzo isina kugadzirwa, nevanhu vakagurwa nemitumbi ine mangwe. Dzimwe nguva vanonwa zvakanyanya chikafu nekumwa. Sezvo Hazel naGus vari murudo, Green anorondedzera muchidimbu pavanoita rudo (zvakachengeteka).
Hazel naGus vanonzwisisa zvazvinoreva kutora mutoro wesarudzo dzakaomarara uye dzisina musoro dzavakaita. Muchirevo ichi, muverengi anotamiswa neiyi nhetembo, njere, zvinosetsa uye izere nerunyararo rudo nyaya, kunyangwe pazviri pachena kuti hapana mukana wekuva nemagumo anofadza.
Nebasa iri, John Green anotyora moyo wemuverengi pane dzakawanda nguva, kuburitsa misodzi uye kunyemwerera panguva imwe chete nekutenda kune pfungwa yaHazel yekushuvira hupenyu 'nguva shoma'. Anomanikidzwa kukura pazera diki, kunyangwe iye ari mudiki.
Saizvozvowo, munyori anosiya zvimwe zviripo zvekufungisisa pamusoro pekukosha kwenguva imwe neimwe uye kurarama mune iripo. Nekudaro, vaverengi vane hanya vanogona kusagadzikana negakava remunyori, sezvo rondedzero inosanganisira tsananguro yakajeka yehupenyu hwezuva nezuva hwemunhu ane gomarara.
Hazel ane zvimwe zvekuda kufa-izvo zvinokonzeresa kushushikana kukuru uye hurukuro pakati pavanachiremba nemhuri pamusoro pekurapwa kwake. Pane imwe nguva, iye ari kutarisa Gus apo iye achirutsa zvekumanikidza; uye ipapo zvinoratidzwa kuti kuchengetedza sekondi yega yega pamwe hakusi kwekutaurirana. Nekufamba kwenguva vatambi vanorasikirwa nekudzora kwemaziso avo, makumbo uye nehunhu hwavo.
Meseji yebhuku rinofanira-kuona
Mamiriro ezvinhu aHazel anoratidza kufunga kwemunhu ari kufa uye zvazvakaita kurasikirwa nemunhu waunoda. Zvisinei, Rutivi rwune simba kwazvo rwechirongwa chose isarudzo yemutambi kuda uye kudiwa, uchiziva kurwadziwa kwaunounza.
Izvo hazvigoneke kuti usanzwe kunzwira tsitsi kune akadaro akashinga uye wechokwadi munhu. Pasi penyeredzi imwe chete Iri ibasa rakasarudzika raJohn Green. Zvirokwazvo, iri ibhuku-rinofanira-kuona, rimwe remhando dzakanakisa mumhando yenyaya dzevechidiki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Pasi penyeredzi imwe chete
Dolores Redondo: Anowanikwa Mabhuku
Kubvunzana naJosé Zoilo Hernández, munyori weiyo trilogy Las ashes de Hispania